एनआरएनए पोर्चुगलमा लाग्यो ताला : पाँचौपटक नेपाली कुट्ने थापा सहित तिनै जनालाई संघले निलम्बन नगरे नागरिक समाजका युवाहरुले कारवाही गर्ने ! - VOICE OF NEPAL
३० जेष्ठ २०७७, शुक्रबार ०१:१४
2075 ??? ???????
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) राष्ट्रिय समन्वय परिषद पोर्तुगलको कार्यालयमा ताला लागेको छ। संघको राजधानी लिस्बनको अन्जोसस्थित कार्यालयमा भेला भएका करिब २०० जना नागरिक समाजका युवाहरुले संघको कार्यालयमा एउटा सुचना टास्दै अनिश्चित समयको लागि ताला लगाई दिएका हुन् । नागरिक समाजका युवाहरूले कार्यालय ताला लगाउदै बरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायत घटनामा संलग्न सबैलाई कारबाही नगरेसम्म ताला नखुल्ने बताएका छन्।
गत आइतबार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भीमसेन थापा, कोषाध्यक्ष विक्रमजङ कुँवर र मनोनित सदस्य विशाल आचार्यले मिलन रेग्मी र रोशन उप्रेतीमाथि साङ्घातिक आक्रमण गरेका थिए । एनआरएनए पोर्तुगलका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भीमसेन थापाले मान्छे कुटेको पहिलो घटना भने होइन। उनले कतिलाई कुटे त्यसको लेखाजोखा छैन, तर समाजमा बाहिर आएका घटनामा नेपाली कुटेको यो पाँचौ घटना हो।
घटनालाई भित्रभित्र सामसुम पार्ने र मिलापत्र गर्ने र बारम्बार मारपिट गर्ने र संघको साख गिराउने काम गर्नेहरुलाई समेत बचाउने रणनीतिमा निरन्तर लागिपरेपछि नागरिक समाजका युवाहरु आक्रोशित हुदै आज करिब ३ बजेतिर संघको कार्यालयमा पुगेका थिए।
संघको कार्यालयमा जम्मा भएका युवाहरुले अध्यक्ष गैरेले जानकारी गराएर कार्यालयमा छलफलका लागि आउन अनुरोध गरेतापनि अध्यक्ष गैरेले आउन आनाकानी गरे। त्यस्तै घटनाका आरोपित संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष थापालाई पनि सम्पर्क गरेर कार्यालयमा आउन अनुरोध गरेको नागरिक समाजका युवाहरु बताउछन। जति कोशिस गर्दा पनि अध्यक्ष गैरे र घटनाका आरोपित उपाध्यक्ष थापा छलफलको लागि संघको कार्यालयमा नआएपछि ३ घण्टासम्म कुरेर बसेका नागरिक समाजका युवाहरु आक्रोशित हुदै एक सुचना टाँस गर्दै संघको कार्यालयमा ताला लगाई दिएका हुन्।
संघका अध्यक्ष तिलक गैरेले हल्का कागजात लेखेर घटनालाई थामथुम पार्न लागिपरेका छन्। तर यही घटनालाई लिएर एनआरएनए पोर्चुगलभित्र भने ब्यापक रडाको मच्चिएको छ।
पत्रकार तथा संघका सदस्य धितालमाथि कुटपिट गरेको घटना र आइतवारको घटनाका पिडितहरुको उजुरी संघको केन्द्रसम्म पुगेको छ।